‘अब म स्याङ्जालीको साझा कार्यकर्ता हुँ’ | Nagarik News - Nepal Republic Media
‘अब म स्याङ्जालीको साझा कार्यकर्ता हुँ’
५ पुस २०७४ ९ मिनेट पाठ
स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित सांसद
पद्माकुमारी अर्यालसँग गरिएको कुराकानी :
चुनाव जित्दा कस्तो महसुस भएको छ ?
– एक्दम खुसी लागेको छ । तीन दशक बढी समयदेखि यस क्षेत्रमा मैले राजनीतिक र सामाजिक काम गर्दै आएकी छु । जनताको घरदैलोमा पुगेर उहाँहरूका समस्या राम्ररी बुझेकी छु । आफ्नो ठाउँबाट विकास निर्माणका कामहरूमा योगदान गरेकी छु । मलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेकी पनि छु । त्यसैले जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा काम गर्न सक्छ भन्ने जनतामा विश्वास छ । यस क्षेत्रका जनतामा परिवर्तनको तीव्र आकांक्षा पनि छ । सायद यही कारण जनताले मलाई भोट दिनुभयो ।
कांग्रेसले ‘बुथ’ क्याप्चर’ गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो नि ?
–आरोप होइन, वास्तविकता हो । उपप्रधानमन्त्री जस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले आफूले
चुनाव जित्नका लागि जनताको मताधिकार खोसेर राज्य शक्तिको बलमा जुन हर्कत देखाउनुभयो, एकदम निन्दनीय कार्य गर्नुभयो। मतदाताहरू मात्र होइन, उम्मेदवारमाथि समेत अभद्र, अशिष्ट व्यवहार गरियो । आफूबाहेक अरूलाई मतदान गरेको खण्डमा घरमा बस्न नदिने, छोराछोरीलाई मारिदिने भनेर आतंकित पारियो । केही मतदान केन्द्रहरूमा यस्तो भयभित अवस्था सिर्जना गरियो । यति हुँदाहँुदै पनि स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ का अधिकांश मतदाताहरूले साहसपूर्वक मतदान गरी मलाई विजयी गराउनुभयो ।
निर्वाचित सांसदको हैसियतले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ ?
–प्रारम्भिक अवस्थामा रहेका बहुउद्देश्यीय आँधीखोला ड्यामको निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रतासाथ अगाडि बढाई सम्पन्न गर्ने । ज्याग्दीखोलामा विद्युत् परियोजनाको कार्यलाई ठोस रूपमा अघि बढाउने । वालिङलाई स्मार्ट सिटी, चापाकोटलाई औद्योगिक केन्द्रको विकास गर्ने साथै गल्याङ, कालीगण्डकी र भिरकोटलाई व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने । जिल्लाभित्रका सम्भावना बोकेका धार्मिक, ऐतिहासिक, कृषि, पर्या–पर्यावरणीय, साहसिक पर्यटनको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पर्यटनमा समृद्ध जिल्ला बनाउने । भू–उपयोग नीतिका माध्यमबाट यहाँका सम्भावनाको पहिचान गरी कृषिमा लागेका कृषकहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने । पाँच वर्षभित्रमा समृद्धिको अनुभव पक्कै पाउने गरी काम गर्नेछु ।
अन्य दललाई समेटेर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
सबै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय र समझदारी कायम गरी अघि बढ्नेछु । विशेषगरी निर्वाचनमा मसँग पराजित उम्मेदवारहरूसँगको सहकार्यबाट जनहितका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछु । उपविजेता उम्मेदवारहरूले चुनावका बेलामा जनताका माझ गरेका वाचा र घोषणाहरूलाई मूल्यांकन गरी कार्यान्वयन गर्नेछु । चुनावमा एउटा पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित भए पनि अब म स्याङ्जाली जनताको साझा कार्यकर्ता हुँ ।
तपाईंका क्षेत्रका मुख्य समस्या के–कस्ता छन् ?
यस क्षेत्रको भौगोलिक विकटता प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । चापाकोट र कालीगण्डकीमा खानेपानी समस्या जटिल छन् । क्षेत्रका कतिपय वडाहरूमा अहिले पनि नियमित रूपमा यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन्, कतिपय बस्तीमा अझै भरपर्दो विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन, जटिल खालका रोगका उपाचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल छैन । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने एउटा पनि सरकारी शैक्षिक संस्था छैन । सिँचाइ र कृषि बजारको समस्या यथावत छ । जिल्लाका सम्भावनाहरूलाई प्रचार–प्रसारका लागि राष्ट्रिय स्तरका कुनै पनि सञ्चारका माध्यमको विकास हुन सकेको छैन । यिनै कारणले यहाँको विकासका सम्भावना धेरै पछाडि परेका छन् ।
तपाईंले आफ्नो जिल्ला÷क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल गर्ने तीनवटा काम के–के हुन् ?
निर्वाचनको प्रचारप्रसार भेटघाट तथा घरदैलोका क्रममा जनताहरूका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या प्रत्यक्ष सुन्ने अवसर मिल्यो । अल्पकालीन समस्या खासै ठूला र महत्वाकांक्षी छैनन् । प्राथमिकताका आधारमा तत्कालीन तपसिलका कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ः
क) मेरो आफ्नै पहालमा सुरु भएका योजनाहरू र अन्य निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका योजनाहरूलाई सम्पन्न गराउने ।
ख) स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत् आपूर्ति, सञ्चार, सिँचाइ, कृषिबजार लगायतका जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्न योजना बनाई चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्ने ।
ग) यस क्षेत्रभित्र रहेका वडा सदरमुकामदेखि मूलसडक (सिद्धार्थ राजमार्ग) सम्म दैनिक बस सञ्चालन हुने गरी सडक निर्माण र विस्तार गर्ने ।
सांसद्ले खालि आश्वासन बाँड्छन्, पूरा गर्दैनन् भन्ने आम गुनासो छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
जनताका समस्या असीमित छन् । अपेक्षाहरू धेरै हुनु अस्वाभाविक होइन । कतिपय व्यक्तिरू भोट बटुल्ने बेलामा मात्र जनताको बीचमा पुग्ने, आश्वासन बाँड्ने, निर्वाचन जितेपछि जनताको बीचमा नजाने, उनीहरूको समस्या समाधानका लागि ध्यान नदिने व्यवहार गर्ने भएकाले जनतामा यस्तो गुनासो रहन्छ । हामी जनतालाई झुक्याउने काम गर्दैनौँ, गर्न नसक्ने काम सक्दैनौँ भन्छौँ, गर्नैपर्ने काम गरेरै छाड्छौँ । जनतालाई निराश हुन दिँदैनौँ ।
मतदातालाई के सन्देश छ ?
हजुरहरूको अपार, विश्वास र मायाले हामी विजयी भयौँ । यो विजय तपाईं हामी सबैको हो । हजुरहरू आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुस्, म मेरो सम्पूर्ण समय, बुद्धि, विवेक र जीवन यस क्षेत्रको विकास र जनताको समृद्धिका लागि समर्पण गर्नेछु । तपाईंहरूको इज्जत र प्रतिष्ठा उच्च राख्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु । म जनताकी छोरी हुँ । मेरो कर्मको सकारात्मक फल मेरा स्याङ्जाली जनतालाई ।
प्रस्तुति : मोहन गुरुङ
प्रकाशित: ५ पुस २०७४ ०८:२७ बुधबार
अब म स्याङ्जालीको साझा कार्यकर्ता हुँ
नेपाली स्याउले बजार पाएन, विदेशबाट साढे चार अर्बको आयात
डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, रुकुम, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा स्याउखेती हुन्छ। ती जिल्लामा उत्पादित स्याउ ढुवानी गरेर काठमाडौंलगायत सहरमा पु-याउन नसक्दा समस्या भएको छ।
केसी समर्थकमाथि प्रहरीको बक्रदृष्टि
स्वतन्त्र युवा समूह, अधिकारकर्मी सामाजिक अभियन्तालगायतले शनिबार माइतीघर मण्डलमा भेला भएर डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा ऐक्यबद्धता जनाउने कार्यक्रम राखेका थिए।
बलात्कारका ४२० घटना
साउन र भदौमा मात्र बलात्कारका ४ सय २० वटा मुद्दा नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। दुई महिनामै बलात्कार ‘ग्राफ’ यति धेरै बढ्नु सामान्य होइन। कोरोना महामारीकै समयमा पनि बलात्कारका घटना बढेपछि प्रहरी पनि सोचमग्न भएको छ। अन्य अपराधमा केही कमी आए पनि बलात्कारका घटना बढेको प्रहरी निष्कर्ष छ।
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्वएमाले समूहले लिएका केही मन्त्रालय पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहलाई दिनुपर्ने विषयमा कुराकानी चलाएपछि अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसमा सहमत हुन सकेका छैनन्।